राष्ट्र बैंककी निर्देशक सुष्माले यसरी लुटिन् आमाको करोडौं रुपैयाँ, जग्गा र सुनचाँदी (श्रृङ्खला-२) - नेपालबहस
| २०:२५:१७ मा प्रकाशित
१८ कार्तिक, काठमाडौं । उमेरले ६० कट्यो । बुढ्यौली लाग्यो । हातखुट्टा कमजोर हुन थाले । सरकारी संस्थानको जागिरबाट रिटायर्ड भैसकेपछि दिन कटाउन जसोतसो गाह्रो भएको थियो । मोरङ विराटनगरका भूपेन्दप्रसाद रिजाल यही मेसोमा घर परिवार व्यवस्थापन गर्ने सोच्दै थिए । चार छोरी र एक मात्रै छोरा भएपनि उनले छोराबाट अपेक्षित साथ, सहयोग र हेरविचार पाउन सकेका थिएनन् । छोरा अलि बढी नै अध्यात्मिक भएकाले आमाबुवाबाट टाढिएका थिए । छोराबुहारीले नै टहल चाकरी नगरेपछि बुवा भुपेन्द्रमाथि तनाव शुरु भयो ।
बुढेसकालमा छोराबुहारीले टहल चाकरी नगरेपछि बुवा भूपेन्द्र जिल्ला अदालत मोरङमा अंशबण्डाको मुद्दा हालेका थिए । अध्यात्मिक चिन्तन बोकेका छोरा सुरेन्दप्रसाद रिजालले बुढेसकालमा आमाबुवाको हेरचाह गर्न छाडेर श्रीमतिसँगै आफ्नै घरसंसार चलाउन थालेपछि बुवा भूपेन्द्रले अदालतमा छोराबिरुद्ध नै अंशमुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमार्फत मिलापत्र गरि अंशबण्डा गराएका थिए ।
बाबु भूपेन्द्रले छोरा सुरेन्दलाई काठमाडौंको बल्खुमा घरजग्गा मात्र दिई अंशबण्डा गरे । यो २०७१ सालको कुरा हो । छोरासँग अंशबण्डा गरेपछि बाँकी रहेको विराटनगरको विगौं बिगाहा जग्गा, घर र अन्य चल सम्पति भने बाबु भूपेन्द्रले आफैसँग राखी श्रीमति शोभा र अपाङ छोरीसहित तीनैजना विराटनगरको जनपथ टोलमा माईली छोरी गंगा सुवेदीको रेखदेखमा बस्न थाले ।
क्यान्सरपीडित आमा पिडा पोख्दै :
०६५ सालदेखि नै पाठेघरको क्यान्सर रोगी आमा शोभा रिजाल र ०७२ सालदेखि कलेजोको क्यान्सर रोग लागेर थलिएका बाबु भूपेन्द्र ०७३ सालदेखि भने क्यान्सर उपचारको क्रममा विराटनगर छाडेर सानेपा–२ ललितपुरमा रहेकी साईली छोरी सुष्मा रिजाल रेग्मीको घरमा बस्न थाले । विराटनगरको घरजग्गा र चलअचल श्रीसम्पति आफैसँग राखेर एकमात्र छोरालाई काठमाडौंको १२ आनामा बनेको घरजग्गा मात्र भागबण्डा गरेर तीनैजना काठमाडौं आउजाउ त गरिरहन्थे । तर क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोगले दुवै बृद्ध थलिएपछि उनीहरु छोरा सुरेन्द्रभन्दा छोरीहरुको बढी भर पर्न थाले । बुढेसकालमा छोराले भन्दा छोरीले माया गर्न थालेपछि उनीहरु काठमाडौं फर्किएका छोरीज्वाई कै घरमा बस्न थालेका थिए ।
बुढाबुढीको स्याहारसुसार र उपचार खर्चवापत छोरी सुष्मालाई २० लाख बढी रुपैयाँ दिइएको थियो । आफ्नो आमाबुवाको स्याहार गर्न समय र खर्च लाग्ने भन्दै बढी किचकिच नहोस भनेर रिजाल दम्पतिले छोरीज्वाँईलाई नगद रुपैयाँ नै दिएका हुन् । तर पनि सुष्माको ठूलो दाउ अन्तै थियो । जुन उनले बुवाको मृत्युपछि क्रमशः सफल पार्ने योजना बनाईन् ।
एक अर्थमा छोराको बेवास्तापछि छोरीज्वाँईको शरणमा परेजस्तै भयो । साइली छोरी सुष्मा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदमा जागिरे थिइन् भने ज्वाँई कमलप्रसाद रेग्मी जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक थिए । रेग्मी अहिले रिटायर्ड भइसकेका छन् । २०७३ साल फागुनदेखि साईली छोरीको शरणमा परेका भूपेन्द्रलाई एकबर्ष अघिदेखि क्यान्सर रोग थिया भने आमाको ०६५ सालदेखि नै । क्यान्सरले थलिएकै कारण आफ्नो मरण जतिबेला पनि हुनसक्ने भन्दै उनले एक्लो छोरालाई भन्दा बढी सम्पति तीनजना छोरीहरुलाई बाँडफाँड गरिदिएका थिए ।
विराटनगरको रिजाल परिवार त्यसै पनि जमिन्दार हुने नै भए । त्यसमाथि कृषि सामग्री संस्थानको महाप्रबन्धक जस्तो आर्कषक जागिरमा छँदा भूपेन्द्रले थप घरजग्गा र सम्पति जोडेका थिए । पूख्यौली रुपमै अथाह सम्पति भएपनि उनले आफ्नो रोगसँग लड्ने क्षमता भने गुमाउँदै गएका थिए । छोरीज्वाईको घरमा बसेर उनी क्यान्सरसँग लड्दालड्दै मृत्युसँग पराजित हुन पुगे । २०७५ मंसिर १ गते भूपेन्द्रले प्राण त्यागे । अस्पतालमा प्राण त्यागेका भूपेन्द्रको सदगत् छोरा सुरेन्द्रले गरे ।
बुढाको मृत्युपछि शोभाको मनोबल घट्दै गयो । उनी पहिल्यैदेखि पाठेघरको क्यान्सरबाट पीडित थिइन् । एकातिर मनोबल कमजोर बन्दै जाँदा अर्कोतर्फ छोरी र ज्वाँईबाट पनि उनले आफ्ना श्रीमान मरेपछि अपेक्षित माया पाउन सकिनन् । बुढाबुढीको स्याहारसुसार र उपचार खर्चवापत छोरी सुष्मालाई २० लाख बढी रुपैयाँ दिइएको थियो । आफ्नो आमाबुवाको स्याहार गर्न समय र खर्च लाग्ने भन्दै बढी किचकिच नहोस भनेर रिजाल दम्पतिले छोरीज्वाँईलाई नगद रुपैयाँ नै दिएका हुन् । तर पनि सुष्माको ठूलो दाउ अन्तै थियो । जुन उनले बुवाको मृत्युपछि क्रमशः सफल पार्ने योजना बनाईन् ।
जब आमा बिरामी भइन् …..
बुढाको मृत्युपछि शोभा कमजोर मात्रै होइन, छोरीज्वाँईबाट अपहेलित हुन पुगिन् । यसक्रममा उनी डिप्रेसनमा गइन् । त्यसक्रममा उनी हरिसिद्धीस्थित क्यान्सर अस्पतालमा कैयौं दिन बस्न बाध्य भइन् । जतिबेला छोरा सुरेन्द्र र माईली छोरी गंगा उनको अवस्थाबाट टाढा थिए । जेठी छोरी गीता भने अशक्त थिइन् । जो अशक्त भएकै कारण विवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा रहिन् र आमासँगै साइली बहिनी सुष्मासँगै थिइन् ।
यतिबेला भने उनले साइली छोरी सुष्माबाटै हेरचाह पाइन् । बिरामी परेकी आमालाई सुष्माले अस्पताल भर्ना गरिन् । उपचार गराइन् । उपचार सेवामा उनी आफै खटिन् । श्रीमान कमलले पनि उनलाइ सक्दो सहयोग गरे । तर यसपछाडीको रहस्य भने अनौठो थियो । आमाले त्यसवापत पनि छोरी सुष्मालाई ५ लाख नगद दिएको बताइन् ।
अनि छोरीले अस्पतालको बेडबाटै हत्याइन् करोडौ सम्पति
बिरामी परेकी आमा । सुष्माले यो मौका गुमाउन चाहिनन् । क्यान्सर रोगी आमा अस्पतालको बेडमा लडेका बेला सुष्माले वृद्धभत्ता निकाल्नुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर गर्न लगाइन् ।
यतिमात्रै होइन, लठ्याब्री आफ्नी जेठी दिदीलाई पालनपोषण गर्छु भन्दै सुष्माले विराटनगर विजयपुर टोल पोखरियामा रहेको सवा कठ्ठा जग्गा पनि हत्याइन् । त्यो पनि आमाको मञ्जुरी बिना नै । यस्तै थापाथलीस्थित माछापुच्छ«े बैंकबाट १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ तथा २२ तोला सुन र १०० तोला चाँदी किर्ते हस्ताक्षर गरेर सुष्माले आफ्नो हातमा पारिन् ।
वृद्धभत्ता भनेपछि कागजपत्र हेर्दै नहेरी अर्धबेहोसी अवस्थामा शोभाले हस्ताक्षर धस्काईन् । तर ती कागजपत्र विराटनगरमा रहेको जग्गा, विभिन्न बैंक तथा फाइनान्समा रहेको नगद रुपैयाँ र बैंकमै राखिएको सुनचाँदी पनि हत्याउने राष्ट्र बैंककी जागिरे छोरी सुष्मा र ज्वाँई कमलप्रसाद रेग्मीको सम्पति हत्याउने सम्झौतापत्र थिए ।
बिरामी रहेकै बेला शोभाले चाहिनेजति सबै कागजपत्रमा हस्ताक्षर गरिदिइन् । उनले पढेर गर्नेभन्दा अस्पतालकै बेडमा अर्धबेहोसी रहेका बेला सुष्माकै हातको आड लिएर सहीछाप तथा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । जो मन्जुरीमा थिएन । जबर्जस्ती पनि होइन । तर अर्कै प्रयोजनमा । जुन अपराध थियो । अरु कतिपय किर्ते हस्ताक्षर हँुदै गयो । सुष्माको अनौठो योजना सफल कार्यान्वयनमा अगाडी बढ्यो ।
यसक्रममा उनले विराटनगर ६ आदर्शटोलमा रहेको ५ बिघा जग्गा ५ करोडमा र २ कठ्ठा साढे ५ धुर जग्गामा बनेको घरसमेत बिक्री गरेको लगभग साढे ६ करोडको सम्पति पहिले बाबु र शेषपछि आमाको नाममा बैंक खातामा थियो । यस्तै विराटनगर कै बखरीमा रहेको जग्गा दवाव दिई आफ्नो नाममा नामसारी गरिन् । यतिमात्रै होइन, लठ्याब्री आफ्नी जेठी दिदीलाई पालनपोषण गर्छु भन्दै सुष्माले विराटनगर विजयपुर टोल पोखरियामा रहेको सवा कठ्ठा जग्गा पनि हत्याइन् । त्यो पनि आमाको मञ्जुरी बिना नै । यस्तै थापाथलीस्थित माछापुच्छ«े बैंकबाट १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ तथा २२ तोला सुन र १०० तोला चाँदी किर्ते हस्ताक्षर गरेर सुष्माले आफ्नो हातमा पारिन् ।
यस्तै मेगा बैंक विराटनगरको खातामा बाबुको नाममा रहेको झण्डै १ करोड पनि उनी झिक्न सफल भइन् । जबकी पतिले ईच्छाएको व्यक्ति आमा जीवितै थिइन । यस्तै सिर्जना फाइनान्सबाट १ करोड ३ लाख, अरनिको सहकारी विराटनगरबाट ७२ लाख रकम सुष्माले आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गर्न सफल भइन् ।
यो सबै रकम जोड्दा सवा ४ करोड रुपैयाँ पुग्छ । तर नगदसँगै त्यसभन्दा पहिले पनि छोरी सुष्माले अनेक बाहनामा लाखौ रकम लिएको आमा शोभाको भनाई छ । ‘म बिरामी परेका बेला वृद्धभत्ताका लागि हस्ताक्षर गर्नुपर्यो भन्थी । मैले हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गरे । तर त्यो त मेरो सम्पति आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने किर्ते हस्ताक्षर तयार पार्नलाई पो रहेछ । यसरी मेरो ४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ छोरीले लुटी’ गहभरी आँशु झार्दै ८४ बर्षीया शोभा रिजालले भनिन् ।
छोरी सुष्मा र ज्वाँई कमलको यो अपराध अस्पतालको बेडमा लडेकी बुढी आमा शोभालाई थाहै थिएन् । उनले कल्पना समेत गरेकी थिइनन् । तर कल्पनै नगरेको किर्ते हस्ताक्षरको अपराध राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदमा रहेकी सुष्माले पदको दुरुपयोग गर्दै गरिरहिन् ।
आमा जब फेरि बिरामी परिन्
क्यान्सरपीडित आमाबुवाको हेरचाह गरेर सुष्माले राम्रै पूण्य कमाएकै थिइन् । तर बुढयौली लागेकी शोभाको मनोबल फेरि कमजोर भयो । अस्पतालबाट घर फर्केपनि शोभाको अवस्था पहिले जस्तो थिएन । तर अवस्था झन अर्कै बनेर आयो ।
‘म दोस्रोपटक बिरामी पर्दा सुष्माले उपचार गर्दै गरिन् । अस्पताल पनि लगिन् । छोरा सुरेन्द्र र माइली छोरी गंगालाई भनेपछि उनीहरु आएर मलाई अस्पताल भर्ना गरे’ चाउरिएका गालामा बर्बरी आँशु झार्दै शोभा भन्छिन्, ‘मलाई मरे मरोस भनेर छोरीले छाडेकी रैछे । मेरो नाममा रहेको सम्पति लुटेर पो उसले मलाई मार्न खोजेकी रहिछे ।’
आमा र दिदीको हेरचाह गर्ने कसम खाएकी सुष्माले बिस्तारै बेवास्ता गर्न थालिन् । किनभने उनले आमा र अपाङ दिदीको सबै श्रीसम्पति हत्याइसकेकी थिइन । उनको मनसुवा पुरा भएपछि आमा र दिदीलाई खाना पनि मुश्किलले दिन थालिन् । आफ्नै जन्म दिने आमा भएपनि उनले सौतेनी आमालाई जस्तो व्यवहार गर्न थालिन् । खाना खुवाउन छाडिन् । यतिसम्मकी बिरामी पर्दा पनि अस्पताल लैजान आवश्यक ठानिनन् ।
आमाको अवस्था जटिल बनेपछि उनले छोरा सुरेन्द्र र छोरी गंगालाई खबर गरिन् । उनीहरु तुरुन्तै सानेपा पुगेर आमा शोभालाई स्टार अस्पताल भर्ना गरे । हप्तौ उपचार भएपछि शोभालाई सञ्चो भयो । उनी फेरि एकपटक मृत्युको मुखबाट फर्केर आइन् । छोरी र ज्वाँईको अपमानपछि उनले त्यहाँ बस्न रुचाईनन् । आवश्यक पनि ठानिन् । छोरीज्वाँईको घरमा बस्दा प्राण जोगाउनै मुश्किल ठानेपछि उनी छोराको घरमा फर्किन् ।
यसरी सुष्माले अपमान गर्नुको कारण खोजी गरिन् । बैंकमा रहेको पैसामा चाँसो दिइन् । तर बैंक मात्रै होइन, सहकारी र फाइनान्समा समेत पैसा थिएन् । खोज्दै जाँदा पत्ता लाग्यो । छोरी सुष्मा र ज्वाँई कमलले बुवा भूपेन्द्र र आमा शोभा तथा लठ्याब्री छोरीको नाममा रहेको सबै पैसा, सम्पति र सुनचाँदी आफुनो नाममा नामसारी गरिसकेकी थिइन् ।
यो थाहा पाएपछि शोभा छाँगाबाटै खसेजस्तै भइन् । श्रीमानले दुःखले कमाएको सम्पति सबै छोराछोरीलाई भागबण्डा गर्ने आमाको योजना सुष्माले तुहाईदिइन् । बुवा र आमाको मात्रै होइन, सुष्माले अशक्त रहेकी जेठी दिदी गीताको नाममा रहेको सम्पति समेत लुटिसकेकी थिइन् ।
माइली छोरी गंगा भन्छिन्, ‘आमाले न्याय पाउनुपर्छ’
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी प्राज्ञ समेत रहेकी गंगा साहित्यकार समेत हुन् । उनी विवाहपछि विराटनगरमा बस्दै आएकी छिन् । दोस्रोपटक बिरामी भएकी आमालाई बहिनी सुष्माले नहेरेपछि दाजु सुरेन्द्रले आफ्नो घर ल्याएको गंगाले बताइन् ।
‘दोस्रोपटक आमा बिरामी भएपछि हामीले खबर पायौ । अनि तुरुन्तै सानेपा गएर आमाको अवस्था हेर्दा जटिल थियो’ शोभाकी माइली छोरी गंगाले भनिन्, ‘अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गरेपछि उहाँले बहिनीसँग बस्नै चाहनु भएन । यहाँ बसेपछि मलाई मार्छे भनेपछि हामीले आमालाई दाईको घरमा लगेर राख्यौ ।’
बहिनीले आमाको नाममा रहेको सबै सम्पति आफ्नो नाममा राखेको कुरा सत्य भएको पनि गंगाले बताइन् । किर्ते गरेर आमाको खाताबाट पैसा निकालेपछि घरमा सम्झाई बुझाई गर्दा पनि सुष्माले नमानेको गंगाको भनाई छ । ‘मैले धेरैपटक सोधे किन यस्तो गरेको भनेर । तर उसले बुढीआमा, उहाँको खातामा रहँदा त्यो अरुले लान सक्छ । दाजुले त्यो धन लिन्छ । भोलि फेरि मरेपछि समस्या हुन्छ भनेर भन्छे । जति सम्झाउँदा पनि मान्दै मान्दिन् ।’
जतिपटक सम्झाएपनि नमानेपछि आमा बाध्य भएर कानुनी उपचारमा गएको पनि गंगाको भनाई छ । ‘आमा र हामीले धेरैपटक सम्झायौ । तर उसले मानिन्’ उनले भनिन्, ‘बुढेसकालमा आमाको मन दुखेपछि बाध्य भएर कानुनी उपचारमा गएर प्रहरीमा उजुरी दिनु भएको हो । आमाले न्याय पाउनुपर्छ ।’
छोरा सुरेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘सुष्माले आमालाई बर्बाद गरेकी छ’
८४ बर्षीया आमालाई बहिनी सुष्माले नराम्ररी बर्बाद गरेको शोभाका एक मात्रै छोरा सुरेन्द्रले बताएका छन् । आमाको नाममा रहेको सबै सम्पति किर्ते गरेर आफ्नो नाममा राखेर आमालाई बर्बाद पारेको सुरेन्द्रको भनाई छ । पूर्व सरकारी जागिरे समेत रहेका सुरेन्द्रका अनुसार ३ वटा ठाउँमा किर्ते गरेर सुष्माले पैसा असुलेकी हुन् । बैंक, फाइनान्स र शेयरमा समेत किर्ते गरेर पैसा हत्याएको सुरेन्द्र बताउँछन् ।
‘आमाको हेरविचार गर्नुको साटो श्रीसम्पति आफ्नो नाममा गरेर बहिनीले ठूलो बर्बाद पारी । आमाको हेरविचार गरेर, मन जितेर, उसको लालनपालन गरेर आमाकै सहमतिमा लिएको भए हुन्थ्यो’ सरकारी जागिरबाट रिटायर्ड भएर काठमाडौंमा बसिरहेका सुरेन्द्र भन्छन्, ‘तर उल्टै बुढेसकालमा आमालाई रुवाएर, उल्टै मार्न खोजेर राम्रो गरिन् । आमाछोरी मिल्नुको साटो यो मुद्दा मामिला गर्दा मलाई ठूलो दुःख लागेको छ । अझै केही बिग्रेको छैन् । आमालाई पालेर बहिनीले यो झगडा मिलाएको भए हुन्थ्यो ।’
सरकारी कर्मचारी भएर पनि आफ्नै आमाबाट सम्पति हत्याउने सुष्माविरुद्ध स्पष्ट प्रमाणसहित उजुरी गर्दा पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान नगर्ने प्रहरीको नियतमाथि साच्चै प्रश्न उठेको छ । ८४ बर्षीया वृद्धाले रुँदै मिडियामा आएर आफूले पाएको पीडा पोखिरहँदा प्रहरी भने राष्ट्र बैंककी निर्देशक सुष्माको शक्तिको आडमा चुप लागेको बसेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अझै पनि आफू आमाछोरी मिलेको हेर्न चाहेको उनको भनाई छ । मुद्दा मामिला गर्दा आफू आमाले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पारे । आफू बीचमा पर्न नचाहेको भन्दै उनले सुष्माले आमासँग माफी मागेर सम्पति फिर्ता गर्दा सहज हुने बताए ।
‘मुद्दा मामिला गर्दा आमालाई पनि दुःख छ । बहिनीको झन ठूलो बदनामी हुन्छ । भइरहेको छ’ उनले भने, ‘मलाई लोभ पनि छैन् । पैसा चाहिएको पनि होइन । आमालाई राम्रोसँग पालोस । दिदीलाई राम्रोसँग पालोस । सम्पति सुष्माले खाओस । केही फरक पर्दैन् । तर यसरी किर्ते गरेर आमालाई अन्याय गरेर बुढेसकालमा मर्नु न बाच्नु नपारोस भन्ने हो ।’
प्रहरी किन गैरजिम्मेवार ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशक जस्तो गरिमामय पदमा बसेर किर्ते गर्ने छोरी सुष्माविरुद्ध आमा शोभाले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दिएकी छन् । पछिल्लो एक बर्षयता छोरीको अत्याचार, लूट र अपराधविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी शोभाले अझैसम्म न्याय पाएकी छैनन् ।किर्ते हस्ताक्षर गरेर बैंकबाट, फाइनान्स र शेयरबाट पैसा लिएको अपराध प्रमाणसहित पेश गर्दा पनि प्रहरीले जिम्मेवार भएर अनुसन्धान अगाडी बढाएको छैन् ।
प्रहरी परिसर टेकुमा गैह्रकानुनी काम गरी बदनियतका साथ ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्पति लिए खाएको कसुरमा छोरी सुष्मा र ज्वाँई कमलप्रसाद रेग्मीविरुद्ध ८४ बर्षीय शोभाले उजुरी दर्ता गरेको ४ महिनाभन्दा बढी भयो । तर अहिलेसम्म पनि प्रहरीले राष्ट्र बैंककी जागिरे सुष्मालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडी बढाएको छैन् ।
उजुरी गर्दा पनि अनुसन्धान अगाडी नबढेपछि, छोरीले लुटेको सम्पति फिर्ता नभएपछि न्याय नपाएपछि ८४ बर्षीय आमा शोभा रुँदै मिडियामा आएकी हुन् । तर प्रहरीले अहिलेसम्म कहिले बैंकसँग प्रमाण माग्दै गरेको, कहिले अनुसन्धान भइरहेको, कहिले हामी लागिरहेकै छौ भनेर झुलाउने गरिरहेको छ ।
बैंकिङ कसुर गरेको स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा अगाडी बढाउनुको साटो सुन्दै नसुनी बेवास्ता गर्नुले प्रहरीमाथि गम्भिर आशंका बढाएको छ । ‘अघिल्लो साता मात्रै टेकुमा गएको थिए । डीएसपी राजकुमार केसीलाई भेटेर मुद्दा कहाँ पुग्यो भनेर सोधेको थिए’ शोभाका छोरा सुरेन्द्रले नेपालबहससँग भने, ‘तर उहाँले बैंकिङ शाखामा जानुस भन्नुभयो । बैंकिङ शाखाले बैंकसँग स्टेटमेन्ट मागेका छौ भन्छ । खोई कहिले न्याय पाउने हो, टुंगो छैन् ।’
सम्पति लुट्ने बहिनीको कर्तुत खोल्दै माइली दिदी गंगा
र याे पनि….
(आफ्नै आमा र दिदीको किर्ते हस्ताक्षर गरेर सम्पति हत्याउने सुष्मा रेग्मीको बाँकी कर्तुत तेस्रो श्रृङ्खलामा प्रकाशित हुनेछ – प्रधानसम्पादक)
गोरखामा नगद चोरी गरी फरार युवक पक्राउ १३ घण्टा पहिले
झोला निर्माण गर्दै रामपुरका महिला १३ घण्टा पहिले
शुक्रबार मौसम बदली रहने १७ घण्टा पहिले
नौ महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी २३ करोड राजस्व सङ्कलन २ दिन पहिले
भारतबाट फर्केका पुरुषमा भेरियन्ट संक्रमण ३ हप्ता पहिले
वायु प्रदूषणका कारण बन्द भएका विद्यालय आजदेखि सञ्चालनमा ३ हप्ता पहिले
ट्राफिक प्रहरीलाई घुस दिन खोज्ने चालक नियन्त्रणमा ४ हप्ता पहिले
सोनाम ल्होछारको उपलक्ष्यमा कांग्रेस नेता केसीले दिए तामाङ समुदायलाई शुभकामना २ महिना पहिले
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकाल निर्वाचित ५ महिना पहिले
कोरोनाको सबै मिलेर सामना गरौ : मुख्यमन्त्री गुरुङ १२ महिना पहिले
१९ वर्ष संचालनमा रहेको ओखरबोट तामाखानी अलपत्र अवस्थामा, चिनियाँ कम्पनीको चासो २ वर्ष पहिले